Nagarik News - 'म त चुर्लुम्मै डुबेर गाउँछु'
पछिल्लो पुस्ताका राम्रो सम्भावना बोकेका गायकका रूपमा लिइन्छ, विश्व नेपालीलाई। उनले भर्खरै आधुनिक गीत गायनमा उत्कृष्ट गायनका लागि इमेज अवार्ड पाए। दुइटा सोलो एल्बम, फिल्मका गीत, कलेक्सन एल्बममा गरी ७० वटा गीत उनको आवाजमा रेकर्ड भइसकेका छन्। उनीसँग धनबहादुर खड्काको अन्तरंग कुराकानीः
इमेज अवार्डमा उत्कृष्ट गायक ठहरिएको खुशी अनुहारमा अझै बाँकी रहेछ!
अझै धेरै देखिन्थ्यो होला। एउटा कार्यक्रमले गर्दा रेस्ट गर्न पाएको छैन। जे होस्, इमेज अवार्डजस्तो प्रतिष्ठित अवार्ड पाउँदा निकै खुशी छु।
अवार्ड पाउनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्थ्यो?
नोमिनेसनमा अघिल्लो वर्ष पनि परेको थिएँ। हाम्रो सोलो एल्बमले तीनटा विधामा अवार्ड जित्यो तर गायनमा पाएको थिइनँ। यस पटक पनि हामीले काम राम्रै गरेका थियौँ। तर, निकै राम्रा, मैले पनि मान्ने दाइहरूसँग मेरो प्रतिस्पर्धा थियो। उहाँहरूसँग नोमिनेट हुनु भनेको मेरा लागि अवार्डेड हुनु बराबर नैे थियो। तैपनि भित्री मनमा 'पाइहालिन्छ कि' भन्ने त सबै कम्पिटिटरलाई हुन्छ नै। नपाएको भए पनि दुःखी हुन्थिनँ।
सानै उमेरमा सफलता हात पार्नुभयो। गायनप्रतिको समर्पणका हिसाबले तपाईंले चाँडै सफलता पाएको हो कि ढिलो?
गायन सुरु गरेको त निकै भइसक्यो। पहिलो गीत छ वर्षको उमेरमै रेकर्ड भएको थियो। तर, पूरै गायनमा लागेको चाहिँ आठनौ वर्ष भयो। कतिले वर्षाैं संघर्ष गरेर पाको उमेरसम्म प्राप्त गर्न नसकेको उपलब्धि मैले यही उमेरमा प्राप्त गरेँ। चाँडोढिलो भन्दा पनि गायन क्षेत्रमा थप केही गर्न युवा अवस्थामै यसले ऊर्जा थपिएको छ।
छ वर्षको उमेरमै गीत गाउने अवसर कसरी प्राप्त भयो?
दाइ श्याम नेपालीले गीत रेकर्ड गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकदिन मलाई टीभी हेर्दै गीत गुनगुनाएको सुन्नुभएछ। त्यसपछि यसले गाउन सक्छ जस्तो लागेर त्यही गीतको 'हो कि होइन रेलिमै' भन्ने एक लाइन मलाई गाउन लगाउनुभयो। स्वर म्याच भएपछि रेकर्डिङ गर्नुभयो।
प्राकृतिक रूपमै मिठो स्वर प्राप्त गर्नुभएको रहेछ। यसलाई निखार्न के–के गर्नुभयो?
म सांगीतिक 'घराना'मा जन्मिएँ। सांगीतिक वातावरणमा हुर्किएँ। मेरो हजुरबुवा कान्छामगर नेपाली राणाकालमै राम्रो कर्खा गायक र सारंगीवादकका रूपमा प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो रे। ठूलो बुवा रामशरण नेपाली त नेपालका चर्चित लोकगायक नै हुन्। उहाँका दर्जनौँ गीत रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएका छन्। बुवा भिवशरण नेपाली तबलावादक हुनुहुन्छ। दाइ श्याम नेपाली अहिलेका गनिएका सारंगीवादकमध्ये एक हुन्। फुपू शान्ति नेपाली पनि राम्रो गायिका हुनुहुन्छ। सांगीतिक क्षेत्रमा करिअर बनाउनका लागि म जन्मेहुर्केको वातावरण उर्बर थियो। स्वर निखार्न संगीत सिकेँ र पढेँ पनि।
तपाईंको स्वरमा धार लगाउन क–कसको योगदान छ?
पुष्पसदनमा पढ्दादेखि अहिलेसम्म सपोर्ट गरिरहनुभएका संगीत गुरु आनन्द राईको। त्यसै गरी क्लासिकल संगीता प्रधान म्यामसँग सिकेँ। परिवारका सदस्यले पनि निकै सिकाउनुभयो।
एसएलसी पास गरुञ्जेल त निकै गीत रेकर्ड भइसकेका थिए होलान्?
बाह्रतेह्र वर्षको उमेरमै 'अमर मिलन', 'मायाको साइनो', 'पिरती आफैँ हुँदो रहेछ' लगायत केही फिल्मका गीतमा गाइसकेको थिएँ।
प्रतियोगिता कत्तिको जित्नुभयो?
२०५५ सालमा रेडियो नेपालले गरेको नेपालव्यापी बालगीत प्रतियोगितामा प्रथम भएको थिएँ। त्यसैका कारण पुष्पसदन स्कुलमा स्कलरसिप पाएको हुँ। त्यसपछि 'ब्राइटर तिम्रो गीत मेरो सुर'मा पाँचै चरणमा प्रथम भएँ। रावा आइकनमा पनि पहिलो भएँ। २०६७ सालमा रेडियो नेपालले नै गरेको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा गायनतर्फ द्वितीय र संगीततर्फ प्रथम भएको थिएँ।
अहिलेसम्म कति वटा गीत रेकर्ड भए?
७० जति भए होलान्। तीमध्ये छसात वटा नेवारी भाषामा छन्।
ब्यान्डमा पनि गाउनुहुन्छ है?
गाउँछु। केही वर्षदेखि 'रुद्र' ब्यान्डबाट गाउँदै आएको छु। त्यसैगरी हाम्रो अर्काे ब्यान्ड 'ऊर्जा' पनि छ। त्यसको भोकलिस्ट हुँ।
गायनबाट स्टारडम त राम्रै पाइराख्नुभएको छ। गीतसंगीतको बजार ध्वस्त छ भन्छन्। आम्दानी कस्तो छ?
एल्बममै गाएर त केही हुँदैन। तर, हामी स्टेज परफर्म गर्छाैं। सिजनका बेला राम्रै आम्दानी हुन्छ। त्यसै गरी दुइटा स्कुलमा संगीत पनि पढाउँछु। यसले गर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन।
स्टेजमा निकै गाइन्छ कि क्या हो?
जान्छु। नेपालबाहेक जापान, फिनल्यान्ड, यूएईलगायत देशमा पुगिसकेँ। तर, अहिले विभिन्न जातीय संस्थाले गर्दा आफ्नो जातको गायकलाई प्राथमिकता दिने भएकाले विदेशमा पनि हामीलाई हत्तपत्त निम्ता आउँदैन। नेपालमा त धेरै स्टेज कार्यक्रममा सहभागी भइन्छ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चम्किनका लागि प्रतिभाबाहेक अरू के–के कुरा आवश्यकता पर्छन्?
राम्रो गाएरमात्रै नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चम्किन सकिँदैन। यहाँ अनेक थरी सांगीतिक कुटनीति पनि चल्छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या रिलेसन मेन्टनको छ। एउटा ग्रुपसँग नजिकिँदा अर्काे रिसाउला कि भन्ने डर छ। को कति बेला भड्किन्छ, पत्तो पाइँदैन। यस्ता कुरामा ख्याल गर्न नसक्ने प्रतिभावान् व्यक्ति पनि टिक्न सक्ने अवस्था छैन।
परिवारमा बाजा बजाउन जान्ने धेरै रहेछन्। तपाईंलाई बजाउन चाहिँ के–के आउँछ?
गिटार, मादल र हार्माेनियम राम्रो बजाउँछु।
हजुरबादेखि दाइसम्मले सारंगी राम्रो बजाउँछन्। तपाईंले सिक्नुभएन?
परिवारमा वाद्यवादक धेरै छन्। मैले चाहिँ फरक हुनका लागि भोकलमै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यसैले त्यतातिर खासै ध्यान दिइएनछ। त्यो कुरा अहिले चाहिँ खड्किन्छ।
गीत गाउन थाल्दा तपाईं त्यसको गहिराइमा पनि उत्तिकै डुब्नुहुन्छ रे!
त्यो त सानैदेखिको बानी हो। मलाई बाटोमा हिँड्दा पनि साथी चाहिँदैन। एक्लै गाना गुनगुनाउनुजस्तो आनन्द अरू केही हुँदैन। मैले सानोमा एकचित्त भएर बालकण्ठले राग गाउँदा बुवाका जापानिज साथीहरूले केही पनि नबुझेर पनि आँखाबाट आँशु झार्नुभएको थियो। त्यसै गरी सानो छँदै हो, भजनशिरोमणि भक्तराज आचार्यको सम्मानार्थ गरिएको एउटा कार्यक्रममा मैले भावमा डुबेर गाउँदा भक्तराज अंकलले सय रुपैयाँ दिनुभएको थियो। केही समयअघि पनि सुकर्म ब्यान्डसँगै मेरो पनि परफर्मेन्स थियो। त्यही दिन चिसोले गर्दा ननस्टप खोकी लागिरहेको थियो। जब गीत गाउन सुरु गरेँ, बीचमा एक पटक पनि खोकी आएन। जब गीत गाउन थाल्छु, त्यसको गहिराइमा हराउँछु। बाह्य कुराले छुँदैन। म त चुर्लुम्म डुबेर गाउँछु।
गायनमा जमिसक्नुभयो। आम्दानी पनि ठीकै रहेछ। यो मंसिर किन खेर फाल्नुभएको त?
अझै एकदुई वर्ष गायनमा स्ट्रगल गरौँ। त्यसपछि घरबार जोड्नुपर्ला।
गर्लफ्रेन्डसँग त्यस्तै सल्लाह भएको छ?
अँ, त्यस्तै–त्यस्तै कुरा भएको छ।
कति भयो लभ परेको?
तपाईंसँग प्रेम गर्न खोज्ने तर अहिलेसम्म प्रस्ताव गर्न नसकेका युवतीको मन दुख्ने भयो?
मलाई धेरैले मन पराए अर्थात् मैले धेरैलाई मन पराएँ भने पनि बिहे एउटैसँग गर्ने हो। त्यसैले गर्लफ्रेन्ड छिन् भनिदिएको हुँ।
फ्यान भड्केलान् नि?
फ्यान भनेका मेरो स्वरका प्रशंसक हुन्। उहाँले मलाई होइन, मेरो गायनलाई मन पराउनु भएको हो। उहाँहरूका लागि अझै राम्रो गाउने प्रयास गर्छु।
प्रेममा चाहिँ कसरी परियो?
अघिल्लो वर्ष ह्वाइटहाउस क्लेजमा एउटा परफर्मेन्स थियो। त्यहाँकै एकजना युवतीले सँगै तस्बिर खिचाएकी थिइन्। पछि फेसबुकमा साथी भयौँ । सायद प्रेम हुनु थियो, हाम्रा कुरा मिल्न थाले। फोनमा कुरा गर्यौँथ। त्यसपछि भेटघाट गर्यौँक। अहिले डेट गरिरहेका छौँ।
'सायद नाच्नै जन्मेको हुँ म'
टेलिभिजनका दर्शकलाई थाहा छ– शंकर बीसीको अनुहार एकैदिनमा कतिपल्ट दोहोरिन्छ। तीजको सिजन आयो भने त जताततै 'शंकरै शंकर'! उन्नाइस वर्षदेखि नृत्य क्षेत्रमा सक्रिय शंकरले ४५ वटा फिल्ममा कोरियोग्राफी गरेका छन्,...